Maitiro Akazara-Detox Anogona Kuve Nesimba Rakawanda Pahombodo Yako - Maitiro Akanaka
musha » Blog » Maitiro Akazara-Detox Anogona Kuve Nesimba Guru Pahombodo Yako
Chinyorwa chinyorwa: Pexels.com
Zuva rega rega, vanhu vanorasikirwa nehupfu hwemhepo, zvokudya, uye mvura inomwa, kwete kukanganwa zvinhu zvinoshandiswa paganda zuva rega rega. Izvozvo zvinokonzera zvinouraya mishonga inouraya mishonga, mapukisi emaplastiki, uye zvinokonzera. Nepo iwe unogona kuedza nepaunogona napo kuti udzivise zvinhu izvi, kazhinji hazvibviri kudzivisa zvose.
Mumuviri wako wakagadzirwa zvakasiyana uye ane nhengo dzinoshanda masikati neusiku kuti dzibudise uye dzibvise chero cheipi inogona kuva mairi. Ganda ndiyo nhengo inonyanya kukosha uye inonyanya kubvisa muviri. Inodzivirirawo muviri kubva pane zvinokuvadza uye inochengetedza zvinhu zvakagadzirirwa kugadzirwa. Cherechedza kuti ganda ndeimwe yenhengo dzokutanga kuratidza zvinokonzerwa nehuwandu hwehupfu muviri. Heano zvimwe zvezvikomborero izvo ganda rako richanakidzwa ne-full detox yako.
Nguva dzose paunosuka, muviri wako unosvitsa kusvika ku10% yehuseyi huse mumuviri wako. Saka, kunyange panguva yako holistic detox cleanse, unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unoshanda kuitira kuti muviri wako unogona kusunungura tsvina nokukurumidza. Saka ganda rako rinogona kubatsira muviri wako wose kuti uwedzere. Iyo pepa ya cayenne inochenesa inozivikanwa nekuita iwe swe sweat kupfuura mamwe detoxing routines.
Paunosarudza urongwa hwekudzivirira hutachiona, iva nechokwadi kuti inobatsirawo kubvisa chero tsvina inogona kunge iri pasi peganda. Izvozvo zvinokonzerawo zvinosanganisira zvinhu zvakagadzirwa zvakanaka zvinokonzera kuputika. Iwe uchanakidzwa neganda rinopenya, rinovhenekera mushure mekunyangadza kwekuti muviri wako uve wakachena uye utano.
Sangano Rinofuridzirwa Remune
Pasina mishonga yakawanda mumuviri, muviri wako wesimba unokwanisa kupa kudzivirirwa kunodiwa. Ganda rinonyanya kushungurudzwa zuva nezuva. Somuenzaniso, kune dzimwe nguva apo iwe unogona kukurumidza kupwanya tsoka yako patafura kana kuzvicheka iwe uchibika. Kukuvara kwakadai kunogona kuva nengozi, zvisinei nokuti zvishoma sei zvinoita sezviri, kana muviri wako unorwara huri pasi.
Kukuvara kweganda kunowanzobatwa nehutachiona hwehutachiona nokuti chikamu ichi chinoratidzika. Nokudaro, chirongwa chekunyora chinokonzera simba chinowedzera simba rako rekudzivirira zvirwere kuitira kuti kukuvara kwakadaro kusanyanya kuoma kuporesa kunyange pasina rubatsiro rwechiremba. Mukuwedzera pane chirongwa chekunyengera, iwe unofanirwa kuchinja zvachose mararamiro ako uye unoita kuti iwe uite kushanda kwakanyanyisa kunobatsira kudzivirira zvirwere kubva pakupinda mumuviri wako. Ganda rinoratidza zviratidzo zvokutanga zvehutano hwakanaka. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kudzivirira zvirwere kubva pakupinda chero chikamu chemuviri wako pazvose. Beyonce muenzaniso wakanaka yezvakanaka zvikomborero zve muviri wose we detox.
Kurumidza Kuwedzera Kurasikirwa
Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kunyanya kuwandisa kunokanganisa nhengo dzako dzomukati. Zvisinei, kune nzira dzakasiyana-siyana umo kuneta kunobatawo ganda rako. Kana imwe, apo muviri wako unowedzera kuwandisa, inowedzera insulin inopikisana. Kana izvi zvikaitika, ganda rako rinotanga kukudziridza mashizha ane mavara anozivikanwa saAcanthosis nigricans. Izvi zvinowanzoitika kune pane zvivara zveganda kana kuti zvinoputika. Kuwedzera mumapanga ako ose mumuviri wako kunokonzera kuti ganda rako ribate unyoro, izvo zvinova mabhakitiriya ekuberekorora pasi. Iyi nharaunda inogona kuva yakaoma uye inotanga kubuda, zvichiita kuti uve nyore kune mbiriso zvirwere.
Kuwedzerwa kuwanda zvakare inowedzera mikana yako yekuwedzera matanho, izvo zvisingafadzi zvakanaka. Vanogona kukumba mukuzviremekedza kwako nyore nyore. Izvi zvinogona kudzivirirwa kana ukaramba uine utano hwakanaka. Muviri wakakwana wakachena unobatsira iwe kurasikirwa nehuwandu hunorema zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unoramba uremu hwekuti ugare uine ganda rakanaka uye rakachena.
Inonoka Migumisiro Yekukwegura
Kukwegura chinhu chisingagoni kudziviswa. Zvisinei, kana iwe unogona kudzidza chimwe chinhu kubva kuHollywood ndechekuti kune chinhu chakadai sekukwegura zvakanaka. Usati wanzwa mapfupa ako akashaya kana iwe ukamira, iwe uchaona kupera paganda rako. Ichatanga kurasikirwa nekusimbiswa, kuve kusununguka, uye kunyange kutanga kudonha. Ganda rako rinowedzera kuoma sezvinoita makore. Kuchenesa masimbi ane nzara uye radicals vakasununguka kubva paganda rako unozvichengeta kubvira pakwegura nguva isati yasvika. Pakupedzisira, ichanzwa ichitonhora uye yakanyanyisa.
Ichowo inzira yakanakisisa yekuchengetedza makwinya kubva pakukura. Nekuchenesa uye hukuru hwema spa, iwe uchazorora ganda rako nekuvandudza kupararira. Ericka Baldwin akabudirira kunonoka kukwegura nokushandisa muviri wose detox.
Inobvisa Zvakaipa Zvakaipa
Muromo wako hausi wega bedzi yemuviri unobudisa zvinonhuwira kubva pane zvaunodya. Ganda rako rinowanzopisa kunhuhwirira zvakanyanya sezvaunoisa mumuviri wako. Somuenzaniso, iwe uchaona kuti vanhu vanonwa doro rakawandisa uye mvura shoma vanowanzova nekunhuwa kunhuwira kunhuwa. Vanhu vanonwa mvura yakawanda vanoputira zvinenge zvakawanda asi kunhuhwirira hakugoni kuenzaniswa. Kana iwe uchinge uchigara uchidya zvisina kunaka, pane mikana yokuti vanhu vanokwanisa kungotaura chete nekuputira ganda rako. A detox inobatsira kubvisa zvinonhuwira izvi uye unosiya ganda rako rinotarisa uye rinonhuwira.
Chikonzero chikuru chinoita kuti iwe ude detox ndeyekuti uone kuti hupenyu hwehupenyu hunovandudza. Izvozvo zvinokubvumira kuti unzwe wakashamisika nezvako uye unowedzerawo mararamiro aunotarisa nawo kana kusina mavara. Iwe uchanzwa uwedzerwa simba mumazuva ako ose.
Allison Green Nditevere Fitness 12 Week Program yekutengeswa kwe $ 47